Tontolon’ny bilaogy Saodiana mandritra ny herinandro – nov 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2018 9:19 GMT
Somary mangingina noho ny tamin'ny herinandro lasa ity herinandro ity tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana. Na dia izany aza, mbola nahita lahatsoratra sasany mahaliana izahay. Indrisy fa amin'ny teny Arabo avokoa ny lahatsoratra aseho amin'ity herinandro ity. Fantatro fa tsy mahay teny Arabo ny ankamaroanareo, ka niezaka aho mba handika ireo ampahany lehibe indrindra isaky ny lahatsoratra.
Prometheus mampitaha ny tontolo Arabo sy ny faritra hafa manerantany amin'ny resaka famoahana votoaty fankahalana. Milaza amintsika momba ireo bilaogera Singapaoreana roa izay nogadraina sy nampandoavina onitra noho ny fiampangana azy ireo tamin'ny fampiasana bilaogy hanapariahana fankahalana sy handrahonana ny filaminana ara-tsosialy izy. “Tsy tahaka izany eto,” hoy izy nanoratra. “Misy ireo forum aterineto mamoaka votoaty avy amin'ny mpanoratra tsy fantatra, ka manafika fivavahana sy sekta hafa.” Na dia izany aza, tsy nisy zavatra natao momba izany. Maneho hevitra momba ny vaovao mikasika ny drafitry ny fitantanan'i Bush hanapoaka baomba ao amin'ny fantsom-pahitalavitra al-Jazeera ihany koa izy ary manontany hoe “nahoana ny matanjaka be manana hery ara-politika sy ara-diplaomatika lehibe tahaka izany no mampiasa ny fomba mahomby rehetra amin'ny fanerena sy fandresen-dahatra, ary mampiasa hery mba hanampenam-bava ny fahitalavitra madinika?”
Fouad al-Farhan nanokana lahatsoratra ho an'ny filohan'i Soisa, izay nitsikera ny governemanta Toniziana momba ny zava-bita mikasika ny zon'olombelona sy ny fomba fijerin'izy ireo ny fahalalaham-pitenenana, ary nanasokajy azy toy ny “lehilahy afaka.” Rehefa vita ny kabarany, dia nipetraka teo amin'ny sezany akaikin'ny filoha Toniziana, izay toa tsy niraika velively ny filohan'i Soisa,. “Mpanao didy jadona izy. Manantena ve ianao fa hitomany izy?” hoy i al-Farhan nanoratra.
Farooha maneho hevitra momba ny raharaha Mohammed al-Harbi, mpampianatra fizika, izay voasazy tsy ara-drariny higadra telo taona an-tranomaizina sy kapoka karavasy in-750. Miantso ny rehetra mba hanampy azy izy. “Arovy ny fizisiana, ary ho mpamorona amin'ny famelana ny fandraisanao anjara ho an'ireo olona tsara ireo!” hoy izy nanoratra.
Taorian'ny fanafihana fampihorohoroana tany Jordania, milaza i Abu Joori fa hafa amin'ny Saodiana ny fihetsiky ny Jordaniana manoloana ny fanafihana raha samy niharan'ny fanafihana mitovy izy ireo tao anatin'ny andro vitsy lasa. Mihevitra izy fa nanampy ny Jordaniana hanangana firaisam-pirenena ny fanafihana; zavatra izay tsy nataon'ny Saodiana. Hoy izy, “Mino aho fa isika, Saodiana dia tsy nanararaotra ny fahafahana lehibe hafa hampandroso ny fahatsapana fitiavan-tanidrazana, sy hanamafy ny hevitra fa antsika ity ampahan'izao tontolo izao ity, ary adidintsika ny miaro azy sy manompo azy.”
“Na dia tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana aza, mahita olona sasany izahay izay milaza mazava ny fankahalany ny sekta sasany, fivavahana sasany, ary koa ny filoha Amerikana George Bush mihitsy aza, manadino fa misy ireo vondrona nanafika ity firenena ity, monina ao ny olom-pirenena tsirairay avy, ary tsy nilaza na dia teny iray akory aza izy ireo mba hiampgana ireo fanafihana ireo” hoy izy nanampy.
Metallic Kitty manoratra momba ny fanavakavahana mihatra amin'ny Arabo ao Eoropa. “Manafintohina ny mahita ny ankamaroan'ny firenena mihevitra ny olona Arabo ho alika,” hoy izy. “Tsy mahamenatra ve izany? Tsy manelingelina ve izany?” hoy izy manontany. Mandritra izany, milaza i ubergirl87 fa “reraka sy torovana amin'i Hollywood mampiseho ny Arabo ho olona tsy mahay sy devoly.”
Farany, ity ny fantina kisendrasenra isan-kerinandro avy aty aminay tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Saodiana: Dotsson nandefa tafatafa mahafinaritra niarahana tamin'i Michael Jackson, izay nifindra vao haingana ao amin'ilay antsoiny hoe “Bahrain kely mpifanolo-bodirindrina amintsika!” Jo mamaritra ny fahatsapana fahaleovantena raha afaka nandoa “cheque” izy. Trilancer manontany tena hoe inona marina no tena mitranga ao amin'ny Arabian TV,” ary mihevitra fa ny fantsona Arabika dia “mifaninana amin'ny fampisehoana faharatsiana maro araka izay tratra fa tsy mitarika korontana.” Ary manamarika i Tyt fa vehivavy no maro an'isa amin'ny bilaogera Saodiana amin'ny teny anglisy. “Mila mihaino ny hevitr'ireo bialogera lehilahy Saodiana isika,” hoy izy.